novembre 2018 – filazantsaramada
NISEHO NY FAHAMORAM-PO
« Dia tsy avy amin’ny asa amin’ny fahamarinana izay nataontsika, fa araka ny famindrampo kosa no namonjeny antsika, tamin’ny fanasan’ny fiterahana indray sy ny fanavaozan’ny Fanahy Masina. » (Titosy 3:5) – Tonga Jesosy Kristy Ilay nanaisotra ny fahotan’izao tontolo izao. Izany no fisehoan’ny fahamoram-pon’Andriamanitra.Fa ny fahamoram-pon’Andriamanitra tamiko sy taminao ve efa niseho tokoa? Efa niseho izany tamin’ny […]
Publié parfilazantsaramada novembre 30, 2018 novembre 30, 2018 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur NISEHO NY FAHAMORAM-PO
NY AMIN’NY ADIDY
« Dia hoy Jesosy taminy: aloavy ho an’i Kaisara izay an’i Kaisara ary ho an’Andriamanitra izay an’Andriamanitra. » (Matio 22:21) – Fakam-panahy ny vola: Sarotra ho antsika olombelona ny ivoaham-mbola raha ivelan’ny sitrapontsika, indrindra fa raha andoavana hetra na andoavana adidy any am-piangonana dia mafy amintsika. Nefa raha izao ambaran’i Jesosy izao dia tokony ataontsika avokoa izany […]
Publié parfilazantsaramada novembre 23, 2018 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur NY AMIN’NY ADIDY
« Aoka ny olona rehetra samy hanaiky ny fahefana lehibe. Fa tsy misy fahefana afa-tsy izay avy amin’Andriamanitra; fa izay misy dia voatendrin’Andriamanitra. » (Romana 13:1) Jesosy dia nanaiky ny fahefana ka nandoa ny antsasaky ny sekely anjara adidiny. Tsy Izy tenany ihany anefa fa ny olony koa. Miantoka ny tenany sy ny olony Jesosy. Amin’ny maha […]
Publié parfilazantsaramada novembre 16, 2018 novembre 16, 2018 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur NY FAHEFANA
TSY MANDRAFY AN’ANDRIAMANITRA
« Ary mamaly miharihary izay mandrafy Azy amin’ny fandringanana azy; tsy hitaredretra Izy ny amin’izay mandrafy Azy, fa hamaly azy miharihary. » (Deotornomia 7:10) -Ny tsy fandrafiana an’Andriamanitra: 1- Tsy fanaovana andriamani-kafa: Mivantana: ny fiantsoana na fahatokiana fanahy hafa hitondra fitahiana dia fandrafiana an’Andriamanitra. Hoy ny teniny hoe: «tsy misy andriamanitra eto amiko.» (Deotornomia 32:39b) Ankolaka: mahatoky […]
Publié parfilazantsaramada novembre 9, 2018 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur TSY MANDRAFY AN’ANDRIAMANITRA
« Aoka ny olona rehetra izay manonona ny anaran’ny Tompo hiala amin’ny ratsy. » (II Timoty 2:19b) – Fanakem-pinoana: Ny fanononana ny anaran’ny Tompo dia fanekem-pinoana. Mivoaka eo amin’ny vavantsika ny finoana ao anatintsika. Raha manonona ny anaran’Andriamanitra amin’ny vavantsika isika dia mivoaka eo amin’ny vavantsika hoe: izany tokoa Izy amintsika. Raha manonona isika hoe: Andriamanitra Ray […]
Publié parfilazantsaramada novembre 2, 2018 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur FANAKA HOMEM-BONINAHITRA